သစ်ထူးလွင် အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခွင့်ပြုပေးသူများ သမိုင်းတွင် တရားခံဖြစ်မည်နယ်စပ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်ခြင်း တိုးလာတာလောကြီး ဌာနေပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ် အခမ်းအနားမြန်မာ အနီး ဘင်္ဂလာရေပြင်တွင် လူသေအလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိမေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19မေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား စေလွှတ်မှု စောင့်ကြည့်တရားမဝင်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိပြည်မြို့ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းမှ အဆောက်အဦးကို မြို့ ခံတွေ ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက်လှိုင်သာယာ ကြိုးကြာဖြူ လူသတ်မှုမှ တရားခံဖမ်းမိသမ္မတဦးသိန်းစိန် VOA မှာ နယ်ပယ်စုံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားမည် ရန်ကုန်မြို့တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံအတွက် မြေနေရာမရှိတော့အီရတ် ဘာသာရေး အုပ်စုကွဲတွေကြား တိုက်ခိုက်မှု လူ၆ဝ သေဆုံးမေလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ် Focus Online ဂျာနယ် အမှတ် ၄၁မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၉)မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အိုင်တီတိုင်းမ် ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀မေလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဂျာနယ် အမှတ် ၄၃၆သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ထွက်ခွာမအူပင်မှာ သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပြန်ပေးမည်မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှု သက်တမ်းတိုးဖို့ အမတ် Crowley အဆိုပြု အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခွင့်ပြုပေးသူများ သမိုင်းတွင် တရားခံဖြစ်မည်Posted: 18 May 2013 07:04 AM PDTအသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် ပထမဆုံး အစည်းအဝေးထိုင်သည့် နေ့တွင်ပင် ပြည်ပမှ ဘီယာချက် စက်ရုံ တစ်ရုံကို ပြည်တွင်း၌ တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြု လိုက်ပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုသိရရာ အဆိုပါ ခွင့်ပြုချက်သည် ယခင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ့၏ လုပ်လက်စအလုပ်ကိုအသစ်တက်လာ သည့်အဖွဲ့က အတည်ပြုပေး လိုက်ရသည့် အဆင့်သာ ရှိပေလိမ့်မည်။မီဒီယာအသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘီယာချက်စက်ရုံများ လိုသည်ထက် ပိုမိုခွင့်ပြုနေသည့်အပေါ် ဝေဖန်ထောက်ပြရေးသားနေကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့သည့် လပိုင်းအတွင်း အများဆုံးခွင့်ပြုခဲ့သည်မှာ ဘီယာချက် စက်ရုံများဖြစ်နေသည်က မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသနည်း ဆိုသည့်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာများစွာရှိနေသည်။၁၈၈၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူပြီးချိန်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း ၁၂၆ နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘီယာချက်စက်ရုံ သုံးရုံသာ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ လတာကာလအတွင်း အောက်ပါကုမ္ပဏီ ငါးခုကို နောက်ထပ် အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခုနစ်ရုံ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် စောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူတို့က ရိုးသားစွာ ခွင့်ပြုခဲ့ ခြင်းဟုတ်မဟုတ်၊ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဆိုသည်ကို မေးခွန်းများစွာမေးရန် ရှိလာသည်။(၁) ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်) သံလွင်ဧရာကုမ္ပဏီ(မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု)(၂) ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ အဖျော် ယမကာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး)၊Beer Chang Intl Co;ltd နှင့် Myanmar Distillery Co;ltd (နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရခွင့်ပြု)(၃)၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (မင်္ဂလာဒုံ)၊ Diamond Mayson Co;ltd(မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရခွင့်ပြု) (ရန်ကုန်တွင် ခွင့်မပြုတော့ဘဲ မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုခုတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု သိရ)(၄) ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ပဲခူး)၊ မြန်မာကားလ်စ်ဘတ်ကုမ္ပဏီ(နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု)(၅) ၂၀၁၃ မေ ၁၀၊ Heinekin ဘီယာ ချက်စက်ရုံ(မှော်ဘီ)၊ APB Alliance Brewery Co;ltd နှင့်Alliance Brewery co;ltd-Myanmar၊ (နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု) (ယခင်နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ လျှောက်ထားခြင်းမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖြစ် ပြောင်းလဲလျှောက်ထား)ယမကာ သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အသည်းရောဂါဖြင့် သေဆုံးနေသည့် ဆယ်ကျော်သက်များတစ်နေ့တခြားများပြားလာနေကြောင်း လေ့လာချက်များအရ တွေ့ရှိထားချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဘီယာချက်စက်ရုံများကို လွယ်လွယ်ကူကူ လိုသည်ထက်ပိုပြီး ခွင့်ပြုပေးနေသည်မှာ မစဉ်းစားတတ်အောင်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောကြားလာသည်။ယမကာသောက်သုံးမှုသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံအရရော၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် ဘာသာရေးအရပါ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ယခုအခါ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းမငယ်လေးများပါ ဘီယာ ယဉ်ကျေးမှုအတွင်း စီးမျောနေကြသည်မှာ လက်မခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ယမကာဈေးနှုန်းကို မြင့်မားစွာ ရောင်းချခြင်း၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်၊အသက်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘီယာနှင့်အရက်ကို အသက်အရွယ်မရွေး၊ အချိန်နှင့် နေရာမရွေး ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနေသည်မှာလူငယ်များ၏ အကျင့်စာရိတ္တကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးစေကြောင်းဝေဖန်စောင့်ကြည့်သူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် အခွန်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံတွက်ချက်ထားသည့် စာရင်းဇယားများအရ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်တွင်း အရက်မျိုးစုံ ပုလင်းပေါင်း (၁၇၂ ဒသမ ၂)သန်း၊ ဘီယာပုလင်းမျိုးစုံ (၆၇ဒသမ ၉၇)သန်း ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါစာရင်းတွင် စည်ဘီယာများ၊ ဘီယာသံဘူးများ၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် တရားမ၀င် အရက်ဘီယာများ မပါရှိပေ။ဘီယာ သံဘူးမျိုးစုံ နှင့် စည်ဘီယာကိုပါ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘီယာပုလင်းနှင့် သံဘူးမျိုးစုံ အရောင်းမှာ သန်း ၁၆၀ အထက် ရှိမည်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးကတွက်ချက်ပြသည်။အရက်ဘီယာ ယမကာထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် ခွင့်ပြုခြင်းသည် အစိုးရကို အခွန်အကောက်တိုးမြှင့်ရရှိစေသည်မှလွဲပြီး တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်အကျိုးမှမရှိဘဲ ရေရှည်တွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများဖြင့်သာ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအတွက်မူ အမြတ်အစွန်း ကြီးမားသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ဘီယာအရက်သောက်သုံးသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများအပေါ် အရက်နှင့်ဘီယာကုမ္ပဏီများက မည်သို့တာဝန်ယူမည်နည်းဆိုသည်ကို မည်သည့် အရက်နှင့်ဘီယာကုမ္ပဏီကမှထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါ။သို့သော်လည်း ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် အရက်နှင့် ဘီယာချက် စက်ရုံများကို သမိုင်းတစ်လျှောက် မကြုံဖူးအောင် ခွင့်ပြုပေးနေခြင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်ကောင်းကျိုးရှိသဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနေသနည်းဆိုသည်ကို ဖြေကြားစေလိုပါသည်။အရက်နှင့် ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ဆိုးကျိုးများအပေါ် မည်သူက တာဝန်ယူမည်နည်းဆိုသည်ကို သိလိုပါသည်။ယခုဆောင်းပါးသည် တစ်ချိန်တွင် အရက်နှင့် ဘီယာများကြောင့် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများရှိပါက အထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရေးသားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။မီဒီယာမျိုးစုံတွင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူများက ကန့်ကွက်နေပါလျက် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့် အရက်နှင့် ဘီယာချက် စက်ရုံများ ဆက်လက်ခွင့်ပြုနေမည်ဆိုလျှင် ထိုခွင့်ပြုသူများသည်တစ်ချိန်တွင် သမိုင်းတရားခံများအဖြစ် မှတ်တမ်းအတင်ခံရမည်မှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ပေတော့သည်။မာဂျေ | မြန်မာတိုင်း(မ်)http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVနယ်စပ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်ခြင်း တိုးလာPosted: 18 May 2013 07:00 AM PDTရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတို့၌ တာရှည် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် တင်ပို့မှုတို့မှာ သိသိသာသာ တိုးလာကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တောပြုန်းခြင်းနှင့် မြေအခွင့်အရေးများကို လေ့လာနေသူ သုတေသန တစ်ဦးက ဧပြီလဆန်း လောက်က တရုတ်နယ်စပ်မြို့ ရူလီအနီး၌တွေ့ရှိခဲ့သည့် အဖြစ်ကြောင့် တုန်လှုပ်သွား ခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။လမ်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက် ငါးမိုင်လောက်ရှည်လျားသည့်နေရာများ၌ သစ်ဆိုင်များကိုသာ တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ နယ်စပ်အနီးသို့ ရောက်လာသည့်အခါတွင်လည်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှနေပြီး တန်ချိန် ၁၅-၂၀ တင်ဆောင်နိုင်သည့် ထရပ်ကား အစီးငါးဆယ်ခန့်ကို တွေ့ခဲ့ ရကြောင်း၊ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ ပို၍လှုပ်ရှားသွားလာမှု ပို၍များကြောင်း၊ တစ်နေ့လျှင် ထရပ်ကား အစီး ၂၀၀ ခန့် မြန်မာနိုင်ငံဘက် (နမ့်ခမ်း) မှ တရုတ် နိုင်ငံ (နန်ဒေါင်) ထဲသို့ ၀င်ရောက်ကြောင်း ထိုသုတေသနပညာရှင်ကပြောသည်။အမည်မဖော်လိုသည့် ထိုသုတေသနပညာရှင်က သူသိရှိရသည့် သတင်းများမှာ ခိုင်လုံသည့်လေ့လာမှုများထက် ပုံပြင်ဆန်ပြီး မျက်မြင်သက်သေများ၏အပေါ်၌ အခြေခံကြောင်း ပြောသည်။ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ရက်အဖွဲ့မှ အရာရှိ ဆိုင်းခါဆန်သည် ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခရီးသွားလာသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်က ဤသတင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။လွန်ခဲ့သည့် ၁၈ လ အတွင်း၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှု သိသာများပြားခဲ့သည်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။သံလွင်မြစ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းသူကပြောသည်။ဤတရားမ၀င်သစ်ကုန်သွယ်မှုမှာ နှစ်အတော်ကြာကတည်းက တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ်တွင်ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။၂၀၀၅ ခုနှစ်အကုန်နှင့် စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ "Global Witness က China's Choice Ending theDestruction of Burma's Frontier Forests" အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်နှင့်မြန်မာအစိုးရ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ဤကုန်သွယ်မှုကို နှိမ်နင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။မြန်မာသစ်တင်ပို့ခြင်းကို တရုတ်အစိုးရက ပိတ်ပင်လျက်၊ မြန်မာအစိုးရကလည်း အလားတူသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်လျက်၊ ကချင်ပြည်နယ်၌ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကိုလည်း ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်က Global Witness ၏ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု၌ နှစ်နိုင်ငံပိတ်ပင်မှုများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သိသိသာသာလျော့ကျသွားပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဆက်စပ်ကုန်သွယ်မှုလည်း အလားတူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။သို့သော်လည်း မကြာမီနှစ်များအတွင်း၌ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အစိုးရနှင့်ကေအိုင်အေ တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးနောက် တရားမ၀င်သစ်ဈေးကွက်မှာ ပြန်လည်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး လုံးဝဒဏ်ခတ်ခြင်း မခံရဘဲ ပြန်လည် လှုပ်ရှားအသက်ဝင်လာခဲ့သည်။သုတေသနပညာရှင်ယုံကြည်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်ခုမှာ ကေအိုင်အေ တပ်သည်တရားမ၀င်သစ်များ ရောင်းခြင်းမှရသည့် အမြတ်အစွန်းများဖြင့် ၎င်း၏ စစ်တပ်ကို အင်အားဖြည့်ပြီးအစိုးရတပ်များနှင့် စစ်ဆင်နွှဲလျက်ရှိကာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများသည်လည်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် ဒေသများသို့ မသွားဝံ့ကြသည့်အတွက် အစိုးရထိန်းချုပ်သည့် ဒေသများအတွင်းရှိ ကျွန်းသစ်များမှာ အစောင့်အရှောက်မရှိ ဖြစ်နေကြ၏။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြတ်စံက ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် ရှိကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာသည့် သတင်းများ ၎င်းတို့ရုံး၌ မရရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။နယ်စပ်ဒေသ၌ ပဋိပက္ခများရှိခြင်း နှင့် ဝေးလံခြင်းတို့ကြောင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် တစ်လျှောက်ရှိအချို့ ဒေသများသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများသွားရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ဦးအောင်မြတ်စံက ၀န်ခံ ပြောဆိုခဲ့သည်။အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်၌ သစ်များတင်ဆောင်ထားသည့် ထရပ်ကားများ နယ်စပ်မှ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်နေသည့် သတင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာ၌ သူ့ရုံးအနေဖြင့် မည်သည့်သတင်းမှမရရှိကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အလွန်သတိထားကြောင်း ဦးအောင်မြတ်စံ က ပြောသည်။တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာရှုန်ကိုဖုန်းက ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကာ နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုကို အားဖြည့်ပြီး နယ်စပ်ကူးသည့် ရာဇ၀တ်မှု အလုံးစုံတို့ကို နှိမ်နင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ ရှုန်ကိုဖုန်းက ပြောကြားသည်။ဘီလ်အိုတူးလ်သောင်းညွန့် ဘာသာပြန်သည်။(မြန်မာတိုင်းမ်)တရုတ် နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်သွား နေသည့် သစ်တင်ကားများကို နယ်စပ်၌ တွေ့ရစဉ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်သွားနေသည့် သစ်တင်ကားများကို နယ်စပ်၌ တွေ့ရစဉ်။http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVတာလောကြီး ဌာနေပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ် အခမ်းအနားPosted: 18 May 2013 06:47 AM PDTကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ တာလောကြီးဒေသမှာ၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ မေလ (၁၆)ရက်နေ့က (၃၇)တပ်ရင်းနှင့်အတူ ပြည်သူ့စစ်အင်အား (၈၄၀)ကျော်ဖြင့် ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (၁)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ရည်ရွယ်ချက် (၃) ရက်ဖြင့် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ်ခြင်း၊ စစ်ရေးပြခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ရိုးရာအကများဖြင့် ပျော်ရွင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ရိုးရာ လှေလှော်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တာလောကြီးဒေသ၊ ဌာနေပြည်သူ့စစ် တစ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပရသော ရည်ရွယ်ချက် (၁) လက်နက်အားကိုး၍ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှုမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး (၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အတူနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားရေး (၃)KIO,KIA အဖွဲ့များလည်း ပြည်သူလူထု၏ ခံစားနေရသော ဒုက္ခများကို မျှဝေခံစားအလေးထား၍ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆွေးနွေးရေး၊ စသည်တို့ကို ဦးတည်ရည်ရွယ်၍ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်း ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားသို့ (၁) ဒေါ်ခင်ပြုံးရည်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး (၂) ဦးဖေသောင်း ကချင်ပြည်နယ် အမှတ်(၆) မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးစံပြည့် ကချင်ပြည်နယ် အမှတ်(၇) မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဟောပြောမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟောပြောချက်များမှ ကောက်နုတ်ချက် တစ်ချို့မှာ အတ္တကြီးမားသော လက်နက်ကိုင် လူမျိုးစုတွေကြောင့် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) လူမျိုးစုတွေ လူအင်အား ရှိသော်လည်း ဘက်ညီသော အင်အားတွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လက်နက်ကိုင်ဖို့လို။ လက်နက်ကိုင်ခြင်းသည် သူတပါးကို အနိုင်ကျင့်ဖို့၊ နှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နဲ့၊ သူတပါး လေးစားမှု ရနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်မှတ်ယူ ထားကြရန်ဖြစ်- စသည်တို့ဖြင့် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)လူမျိုးစုများ၏ သမိုင်း၊ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဟောပြောခဲ့ပြီး တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) ရှမ်းလူမျိုးများ၏ အမျိုးဘာသာ သာသသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြစ်ကြီးနားနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတလျှောက် မိမိတို့ပျောက်ဆုံးခဲ့သော နယ်မြေ ပြန်လည်သတ်မှတ် ပေးနိုင်ရေးတို့အပြင် လက်တလောမှာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်နယ်စပ်များတဆင့် စိမ့်ဝင် ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်တို့ အကြောင်းကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွ ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြားပြီး (၂)နှစ်ကာလ ကြာမြင့်လာသည့်တိုင်အောင် ပီပြင်သော ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး မဖေါ်ဆောင်နိုင်သေးသည့်အတွက် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ မပြန်နိုင်ကြသေးသည့်အပြင် မိမိတို့၏ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း KIA စစ်သား စုဆောင်းရေး အန္တရယ်နှင့် ထောင်ထားသော မိုင်းအန္တရယ်များကြောင့် ရွာနှင့် ဝေးလံသော နေရာများသို့ သွား၍ မလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည့်မှာ (၂)နှစ် ရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုလို စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကြားမှ မိမိတို့၏ အသက်၊ အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ပြည်သူ့စစ်တွေ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့စစ်နာယက ဦးစန်းဝေမှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဦးကော လေးby Myanmar News Nowရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးမှ ဟောပြောနေစဉ်http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမြန်မာ အနီး ဘင်္ဂလာရေပြင်တွင် လူသေအလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိPosted: 18 May 2013 06:29 AM PDTဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေပြင်တွင် နောက်ထပ် လူသေ အလောင်း ၇ လောင်းကို ယမန်နေ့ နံနက်က ထပ်မံ ဆယ်ယူရရှိခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလာရဲက ပြောသည်။ ယခု ဆယ်ယူရရှိသည့် အလောင်းများမှာ ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြပြီး တက်ကနက် မြို့နယ် အတွင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် မျောပါနေ သည်ကို ဒေသခံများ၏ အကူအညီဖြင့် ဆယ်ယူခဲ့သည်ဟု ရဲတာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19Posted: 18 May 2013 06:15 AM PDTမေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါPdf ကို ဖတ်ရှုရန်အတွက် အောက်ပါလင့်မှ font ကို download ရယူပြီး မိမိ သုံးနေသော ကွန်ပျူတာတွင် Install လုပ်ပေးရပါမည်။http://www.mediafire.com/?ojojmbuhp3sq1jmhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)Posted: 18 May 2013 05:53 AM PDTမေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVလုံခြုံရေးအတွက် အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား စေလွှတ်မှု စောင့်ကြည့်Posted: 18 May 2013 05:36 AM PDTမြန်မာ အမျိုးသမီးများ လုံခြုံရေးအတွက် ကိုးရီးယားဘက်မှ အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ စေလွှတ်မှုကို စောင့်ကြည့် နေဆဲဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှ သတင်းရရှိသည်။ အစိုးရ ပြည်ပ အလုပ်အကို အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “စက်ရုံတခုမှာ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား အချင်းအချင်း အဖော်ရအောင်လို့ တကြိမ်ကို နှစ်ယောက်မခေါ်ရင် မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောထားတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိနိုင်ဘူး” ဟုဆိုသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVတရားမဝင်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိPosted: 18 May 2013 05:29 AM PDTတရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်လာသူ အမျိုးသမီး ၂ ဦးအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ သား ၂၀ ဦး အား မဏိပူရပြည် နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ ချိုးဖောက်သည့်အတွက် သောကြာနေ့က တရားရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် Sangai Express သတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVပြည်မြို့ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းမှ အဆောက်အဦးကို မြို့ ခံတွေ ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက်Posted: 17 May 2013 09:40 PM PDTပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်မြို့တွင် ၁၇-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၀၈း၁၀ အချိန်ခန့် ပြည်မြို့၊ ဆံတော်ရပ်ကွက် ၊ ကမ်းနားလမ်း ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနား သောင်ပြင်ကို မြေဖို့ပြီး အဆောက်အဦးကြီး တခု ဆောက်လုပ် နေသဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်၏ အလှသဘာဝကို ဖုံးကွယ်နေခြင်း၊ မြစ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေခြင်းတို့ကြောင့် ယင်းအဆောက်အဦးအား ဖျက်သိမ်းပေးရန် ပြည်မြို့နေ လူထုက ၁၀၀ ခန့် က ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVလှိုင်သာယာ ကြိုးကြာဖြူ လူသတ်မှုမှ တရားခံဖမ်းမိPosted: 17 May 2013 09:25 PM PDT၁၆.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ (၁၆၃၀)အချိန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ကြိုးကြာဖြူ အထည်စက်ရုံ တွင် ဖြစ်ပွားသော စက်ရုံလုပ်သားချင်း စကားများရာမှ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ကြိုးကြာဖြူ အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်သားများဖြစ်သည့် သက်ပိုင်လင်း(ခ)လင်းလင်း နှင့် အလုပ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တေဇာကျော်တို့ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါတရားခံ တေဇာကျော်http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVသမ္မတဦးသိန်းစိန် VOA မှာ နယ်ပယ်စုံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားမည် Posted: 17 May 2013 08:31 PM PDTအမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးအတွင်း မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ အဖြစ်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိလာမယ့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာတော့ ဗီအိုအေမှာ ပြုလုပ်မယ့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ ပညာရေး စတဲ့ နယ်ပယ်စုံက လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ် အမေရိကန်ကို သွားမယ့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လိုက်ပါပို့ဆောင်သည့် ဝန်ကြီးများအား နှုတ်ဆက်နေစဉ်။ (မေ၊ ၁၇၊ ၂၀၁၃။)http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVရန်ကုန်မြို့တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံအတွက် မြေနေရာမရှိတော့Posted: 17 May 2013 08:17 PM PDTရန်ကုန်မြို့တိုင်း ဒေသကြီးတွင် နောက်ဆုံး စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံ အဖြစ် ထပ်မံ အသုံးနိုင်သည့် မြေနေရာ မရှိ တော့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်ရေး ဌာနမှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် လှိုင်သာယာမြို့ နယ်ထိန်ပင်သုသာန် အမှိုက်ပုံနှင့် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်အတွင်း ရှိ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံနှစ်ခု တို့ကို ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVအီရတ် ဘာသာရေး အုပ်စုကွဲတွေကြား တိုက်ခိုက်မှု လူ၆ဝ သေဆုံးPosted: 17 May 2013 07:31 PM PDTအီရတ် နိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး အုပ်စုကွဲတွေကြား တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အနည်းဆုံး လူ၆ဝ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ဒါဟာ လပေါင်းများစွာ အတွင်း အသေအပျောက် အများဆုံးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်နဲ့ အနီးတဝိုက်က ဆွန်နီ မွတ်ဆလင်တွေ နေထိုင်ရာ ဒေသတဝိုက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု သုံးခု အနက် Baquba အရပ်က ဗလီအပြင်ဖက်မှာ သောကြာနေ့ ဝတ်ပြုသူတွေ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါအီရတ်က မြို့ကြီးတွေမှာ သွေးချောင်းစီးတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ် Focus Online ဂျာနယ် အမှတ် ၄၁Posted: 17 May 2013 07:42 PM PDTမေလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ် Focus Online ဂျာနယ် အမှတ် ၄၁ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၉)Posted: 17 May 2013 07:15 PM PDTမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၁၉)ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အိုင်တီတိုင်းမ် ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀Posted: 17 May 2013 07:42 PM PDTမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် အိုင်တီတိုင်းမ် ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀Posted: 17 May 2013 07:40 PM PDTမေလ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် ၈၇၀ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမေလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဂျာနယ် အမှတ် ၄၃၆Posted: 17 May 2013 07:40 PM PDTမေလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ ဂျာနယ် အမှတ် ၄၃၆ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ထွက်ခွာPosted: 17 May 2013 05:22 PM PDTနှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး အတွင်း မြန်မာ သမ္မတ တစ်ယောက်ကို အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်က ပထမဆုံး အကြိမ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သောကြာနေ့က ဝါရှင်တန် မြို့တော်ကို ထွက်ခွာ ဖို့ ရှိပါတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ကျရင် အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံ မယ်လို့ အမေရိကန် အစိုးရ ဘက်က ထုတ်ပြန်ပေမဲ့ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ အစိုးရ ဘက်ကတော့ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်တာ မရှိ ပါဘူး။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပထမအကြိမ် ခရီးစဉ်မှာ သမ္မတ အိုဘားမားကိုရော အဲဒီတုန်းက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နဲ့ပါ တွေ့ဆုံခဲ့http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမအူပင်မှာ သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပြန်ပေးမည်Posted: 17 May 2013 05:08 PM PDTဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မလက်တို ကျေးရွာအုပ်စုမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေဧက ၄၅၀ ကို လယ်သမားတွေထံ ပြန်ပေးမယ်လို့ မလက်တိုကျေးရွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာ လယ်ယာမြေ အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မအူပင်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအေးသောင်းက မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်ဧက တစ်ထောင်ထဲက ဧက ၄၅၀ ကို လယ်သမားတွေလက်ထဲ အပြီးအပိုင် ပြန်လည်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ကျန်ရှိတဲ့လယ်ဧက ၅၅၀ ထဲက ၁၂၈ ဧကကိုလည်း လယ်သမားတွေဘက်က အထောက်အထားပြနိုင်ရင် ပြန်ပေးဖို့ကိုပါ ကော်မရှင်က စီစဉ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။အဲဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းက တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်မေလ ၂၇ ရက် နေ့မှာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်မြေတွေရဲ့ လျော်ကြေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းပေးမယ့်အကြောင်း အာဏာပိုင်တွေက ဒေသခံတွေကို မနေ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုက လယ်သမား ဦးသန်းလှိုင်က ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီကုန်ပိုင်းအတွင်း လယ်သမား ၃၀၀ လောက်ဟာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်ယာမြေကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ တင်းမာမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး လူစုခွဲတဲ့အတွက် လယ်သမား ၉ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သလို ဒေသခံရွာသားတွေရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကြောင့်လည်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၆ ဦးဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။RFA Burmesehttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWVမြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှု သက်တမ်းတိုးဖို့ အမတ် Crowley အဆိုပြု Posted: 17 May 2013 05:04 PM PDTမြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို တရားဝင်ခရီးစဉ် လာရောက်မယ့် ရက်ပိုင်းအလိုမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံက ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ အထူး သဖြင့် ကျောက်မျက် ရတနာတွေ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ တင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ ဥပဒေတရပ် သက်တမ်းတိုးဖို့ အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ သြဇာညောင်းတဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တဦးက လွှတ်တော်ကို အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းက အခြေအနေတွေဟာ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ဆက်ပြီးရှိနေဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ခုလို ဥပဒေသက်တမ်း တိုးဖို့အဆိုကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခရီးစဉ်နဲ့ အချိန်ကိုက်တင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အကြောင်း ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ US Campaign for Burma ကပြောပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မခင်ဖြူထွေးက အပြည့်အစုံ ပြောပြပေးပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံက ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာတွေ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ တင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ Burma Freedom and Democracy Act လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အက်ဥပဒေကို သက်တမ်းတိုးဖို့ ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော် အမတ် Joseph Crowley နဲ့ ရီပက်ပလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Peter King တို့က ကွန်ဂရက်စ် လွှတ်တော်ကို အဆိုပြု တင်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေသေးတာကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ဆက်ပြီးချမှတ်ထားဖို့ လိုအပ် နေသေးတယ်လို့ မစ္စတာ Crowley က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မေလကနေစလို့ ရက် ၉၀ အတွင်း ဒီဥပဒေ သက်တမ်းတိုးဖို့ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာ မဲပေးဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ တိုက် တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် တရားဝင် ခရီးစဉ်နဲ့ အချိန် ကိုက် လွှတ်တော်အမတ်တချို့က ဒီဥပဒေသက်တမ်း တိုးဖို့ ပြောလာခဲ့တာ ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ဆက်ရှိဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကို သိသာထင်ရှားစေဖို့အတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခရီးစဉ် ရက်ပိုင်းအလိုမှာ အခုလို လွှတ်တော်ကို ချိန်ကိုက်တင်သွင်းပုံ ရတယ်လို့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ US Campaign for Burma က လှုပ်ရှားမှုတာဝန်ခံ Rachel Wagley က ပြောပါတယ်။“ဒါ တမင်ရည်ရွယ်ပြီး ချိန်ကိုက်လုပ်တာပါ။ ကျမတို့ အရင်ကတည်းက သတ်မှတ် ထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ မူဝါဒတွေကို ဆက်လက် ချမှတ်သွားနိုင်ဖို့ တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ခုချိန်မှာ သက်တမ်းတိုးဖို့ လုပ်ရလဲဆိုတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို သာမက အမေရိကန် အစိုးရ ကိုပါ သတင်းစကားပါးချင်တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက အမေရိကန်အနေနဲ့ လိုက်လျောဆောင်ရွက်မှုတွေ ဆက်လုပ် နေတာ၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ဂုဏ်ပြုနေတာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပကတိ အခြေအနေနဲ့အညီ တုံ့ပြန်တာ ထက် ပိုနေတယ်ဆိုတာပါ။ တကယ့် ပကတိအခြေအနေမှာက စစ်တပ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပိုများလာနေသလို သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကလည်း နိုင်ငံ အနှံ့မှာ ရှိနေတုန်းပါ။ ဆိုတော့ ဒီ အက်ဥပဒေကို သက်တမ်းတိုးခြင်းအားဖြင့် လွှတ်တော်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုတွေကို ခိုင်ခိုင် မာမာ တိုးမြှင့် မဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့ ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေ ပယ်ဖျက်ပေး မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”အမေရိကန်အစိုးရဟာ လောလောဆယ်မှာ မြန်မာအစိုးရကို လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး လိုက်လျောနေတယ်လို့လည်း US Campaign အဖွဲ့က ဝေဖန် ပါတယ်။ မြန် မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး မလွတ်မြောက်သေးတာ၊ တိုင်းရင်း သားဒေသတွေမှာ စစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဆက်လက် ရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်အနေနဲ့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ထပ်ပြီးတော့ မလျှော့ပေးသင့်ဘူးလို့ Rachel Wagley က ပြောပါတယ်။“ကျမတို့ရဲ့ အဓိက ပြဿနာက ပြောရရင် အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရမှာ ထက်ကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ လိုက်လျောတုံ့ပြန်နေတဲ့ကိစ္စပါ။ လက်တွေ့ အခြေအနေကိုကြည့်ရင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အတင်း အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ ကျူးလွန်သူတွေကို တရားဥပဒေက ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု ထားနေ တုန်းပါ။ ဆိုတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့ မှုတွေ ပြန်ရုပ် သိမ်းဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ချွင်းချက်မဲ့ပြ...[Message clipped] View entire message Categories: Myanmar Blogs တစ်လလျှင် လူသတ်မှု ၁၀၀ ကျော် ဖြစ်
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မတ်လနှင့် ဧပြီလတို့၌ လူသတ်မှုပေါင်း အကြိမ် ၁၀၀ ကျော်စီ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၏ စာရင်းများအရ စုံစမ်း သိရှိရသည်။ ဧပြီလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသတ်မှု ၁၂၈ ခုအနက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူသတ်မှု အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ဒုတိယအများဆုံး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် လူသတ်မှု တတိယမြောက် ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News Spicy Miso Buckwheat Noodle Soup
I loved this Taiwanese cooking show called "食在有健康", not only it teaches us what food to eat to make us healthier, it also uses that food and teaches us how to cook it. I think the featured...
Categories: Myanmar Blogs ပုဂ္ဂလိက ပညာရေးဂယက်၏ အနားသတ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်ကပင် နားလည်မှုဖြင့် စတင်ပေါ်ပေါက် လာသော International School (နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ပြုကျောင်း) များမှာ ၁၈ နှစ်သား ရောက်ချိန်အထိ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ကျောင်း အနေနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်း မရှိသေးသော်လည်း တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် အသိအမှတ်ပြု လက်ခံသူ ပိုမိုတိုးတက် လာပြီး မြန်မာ့ပညာရေး ဈေးကွက်တွင် ဈေးကွက် အခိုင်အမာ ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရတက်လာပြီး ၂ နှစ် ကျော်အကြာ ၂၀၁၃ မေလတွင် International School များ ကျောင်းအပ်ခနှုန်းထား အပြောင်းအလဲနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် မကျေနပ်ရာမှ ကျောင်းသားမိဘနှင့် ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူများ အကြား စတင်ပေါ်ပေါက်လာသော ပေါက်ကွဲမှုများမှသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးစနစ်နှင့် အနားသတ် မဲ့နေသည့် မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ကို မေးခွန်း ထုတ်လာကြသည်။ အမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဝေဖန်လာကြသည်။ ယင်းသည်ပင် နှစ်ပေါင်း များစွာ သူ့သဘောသူဆောင်နေသော အနားသတ်မဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးအတွက် လားရာသစ်များစွာကို မီးမောင်းထိုးလိုက် သကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံပညာရေး နယ်ပယ်ကိုကြည့်ပါက အစိုးရပညာရေး၊ နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးများနှင့် သင်ကြားသော ပုဂ္ဂလိကပညာရေးနှင့် အစိုးရသင်ရိုးကို ပင်မ ထား သင်ကြားသော အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ပုဂ္ဂလိကပညာရေး ဟူ၍ ပညာရေးစနစ်သုံး မျိုးရှိနေသည်။အစိုးရပညာရေးကို ကြည့်ပါက ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေသည် အထိ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ စနစ်ဆိုး၏ အောက်တွင် ပျက်စီးယိုယွင်းနေရသည်။အုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက် စမ်းသပ် ပြုပြင်ခဲ့သော ပညာရေးစနစ်များသည် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးနှင့် ဝေးကွာခဲ့သလို အာဆီယံဒေသတွင်းမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ကျခဲ့သည်။ လက်တွေ့အားနည်းချက် များနှင့် ဆရာဦးဆောင် သင်ကြားသော ပုံစံများကြောင့် စာသင်ခန်းနှင့်ကျောင်းသားများ ကြား ခြားနားလာခဲ့သလို အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲစနစ် ယိုယွင်းချက်ကြောင့် တွေးခေါ် စဉ်းစားနိုင်စွမ်းထက် အလွတ်ကျက် ပညာရေးစနစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ တစ်နေ့တာအချိန် သုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါးမှာ ကျောင်းတွင်း စာသင်ချိန်၊ ကျူရှင်ချိန် (ကျောင်းစာကို နားမလည်သဖြင့် ကျူရှင်တွင် အချိန်ပိုယူ သင်ကြားချိန်)၊ စာကျက်ချိန်တို့ဖြင့် အချိန် ကုန်သွားသည်။ကျောင်းသား တစ်ယောက်အတွက် တစ်ရက် ၁၃ နာရီမှ ၁၆ နာရီအထိ အချိန်များ ကို ကျောင်းစာအတွက် အသုံးပြုရသဖြင့် အိပ်ချိန်ရှစ်နာရီ ပေါင်းပါက ကိုယ်ပိုင်အချိန် မရှိသလောက်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ယင်းသည်ပင် အစိုးရပညာရေးစနစ်၏ အဓိကအားနည်းချက် ဖြစ်လာသည်၊ အမှန်တကယ်တတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်း၊ လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် အသုံးဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်းကို ထည့်မတွက် သေးသည့်တိုင် အစိုးရပညာရေး စနစ်မှာ ပြုပြင်စရာ လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေသည်။ ယင်းကြောင့်ပင် မြန်မာ့ပညာရေး စနစ်ကို အောက်ခြေကပင် ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ယနေ့ပြောကြားလာခြင်း ဖြစ်သည်။အစိုးရပညာရေး စနစ်၏ အဆိုပါ အားနည်းချက်များကြောင့် ငွေကြေးတတ် နိုင်သူများက နိုင်ငံခြားပညာရေးကို အလေးပေး ဦးတည်သော International School များကို အားပြုလာကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်လာသည့် International School များမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ပညာရေး စနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့် သင်ကြားကြခြင်းဖြစ်ပြီး သင်ရိုး၊ သင်ကြားနည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြား ကြသည်။"မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမေရိကန် ပညာရေးစနစ်နဲ့ သင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတွေထဲမှာ အမေရိကား အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရထားတာ ISY (International School Yangon)၊ ISM (International School of Myanmar)၊ YIS (Yangon International School) ရယ် အဲဒီကျောင်းတွေ ရှိတယ်၊ ISY ကတော့ အမေရိကန် သံရုံးက ပညာရေးဌာန အသိအမှတ်ပြုနဲ့ လုပ်လာတာ နှစ် ၅၀ ရှိပြီ။ သူက သက်တမ်း အကြာဆုံးပဲ၊ Horizon ကျောင်းကတော့ ဆွစ်ဇာလန် ပညာရေးစနစ်ကို သုံးတယ်၊ သူလည်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရထားတာပဲ" ဟု မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတို့ရှိ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ပုဂ္ဂလိကကျောင်း များတွင် သင်ကြားရေး အတွေ့ အကြုံ ၁၅ နှစ်နီးပါးရှိသူ ဦးအောင်ဆန်းမြင့် က ရှင်းပြသည်။ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုသည့် နိုင်ငံများ မတူသကဲ့သို့ သင်ကြားသည့် စနစ်မတူခြင်း၊ သင်ရိုးမတူခြင်း တို့ကြောင့် ကျောင်းသားမိဘ အများစုအတွက် ကျောင်းရွေးချယ်မှု၊ ကျောင်းပြောင်းရွှေ့မှု များတွင် ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်ရန် ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ထို့အပြင် ကျောင်းအများစုတွင် မြန်မာဘာသာ မသင်ကြားခြင်း၊ မြန်မာ့သမိုင်း အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး သိသင့်သိထိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ အကြောင်း သင်ကြားမှု မရှိခြင်း တို့မှာလည်း အကြီးမားဆုံးပြဿနာ တစ်ရပ်အဖြစ် ပညာရှင်များက ထောက်ပြကြသည်။တစ်ဖက်တွင်လည်း အားနည်းချက် ရှိလျက်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းမှု အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုပညာရေး၊ ဘဝအာမခံချက် ရှိခြင်းတို့ကြောင့် International School များတွင် တက်ရောက် သင်ကြားသူများမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာသည်။သို့သော် ယခုလဆန်းပိုင်းက International School of Myanmar (ISM) ကျောင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျောင်းလခ တိုးမြှင့်ခြင်းမှ စသည့် ကျောင်းသား မိဘ များနှင့် ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူများ အကြား အငြင်းပွားမှုမှာ ၁၈နှစ်ဝန်းကျင် သက်တမ်း ရှိလာပြီဖြစ်သော International School များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတိပေး ခေါင်းလောင်းထိုး လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည်။ယင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ကျောင်းလခတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာဖြင့် တင်ပြခြင်းနှင့် International School များနှင့် ပတ်သက်သော ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းပေးရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌများထံ အိတ်ဖွင့် ပေးစာဖြင့် တင်ပြခြင်းတို့ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ISM ကျောင်းမှ ကျောင်းသား မိဘများက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။"နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်၊ နိုင်ငံခြားသား ဆရာ ဆရာမတွေ ဆိုရင် သူတို့နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာကို အမျိုးမျိုးပြပြီး ခေါ်ထားတယ်၊ တရားဝင် ဆရာ ဆရာမ အဖြစ်ခေါ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ဆီက အခွန်လည်း မရဘူး၊ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ISM ကျောင်းမှာ ဆို သူတို့အတွက် တစ်လ လစာက ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ကနေ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ထိပေးရတယ်၊ ဆရာ ဆရာမ အားလုံးအတွက်ဆို ဒေါ်လာ ငါးသိန်းလောက် အသားတင်ကုန်တယ်၊ ကျန်တာ သူတို့နေစရိတ်၊ ဗီဇာပြည့်ရင် ထိုင်းတို့ကို ရှောင်တိမ်းဖို့အတွက် လေယာဉ် လက်မှတ်ခ၊ စားစရိတ် အကုန်ပေးရတယ်" ဟု ဆရာ ဦးအောင်ဆန်းမြင့်က ဆိုသည်။ထို့ကြောင့် ပညာရေးကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမည်ခံနှင့် ဖွင့်ထား ကြသည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းများ တရားဝင် ဖြစ်ရေး၊ ဥပဒေတစ်ရပ်နှင့် ထိန်းကွပ်ရေး ဆိုသည့် တောင်းဆိုချက်တစ်ရပ် အသက် ဝင်လာသည်။"ဥပဒေပေါ်လာတာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အချိန်ယူလေ့လာပြီး ဘယ်နိုင်ငံကပညာရေး ဥပဒေတွေက ဘယ်လိုရှိတယ်၊ ဘယ်လိုစနစ် မျိုးက ဘာအားနည်းချက် ရှိတယ်ဆိုတာ မျိုးဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသင့်တယ်၊ မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူး၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်မှ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်လာစေချင်ဘူးဟု Horizon International School မှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးရဲထွန်းက သုံးသပ်သည်။International School များမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း (Creativity)၊ မတူ ကွဲပြားမှု (Diversity)၊ နည်းပညာသစ်၊ အတွေး အခေါ်သစ်များကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင် နိုင်ရန် သင်ကြားရခြင်းဖြစ်ရာ ယင်းတို့ကို လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဥပဒေမဖြစ်ပါက သင်ကြားမှုကို ထိခိုက် နိုင်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။လက်ရှိအနေအထားတွင် အခြေကျနေပြီး အားကောင်းစပြုနေသည့် နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ အတွက်မူ စနစ်သစ် တစ်ခုကြောင့် ဟန်ချက်ပျက်သွားမည် ကိုမူ ကျောင်းတည်ထောင်သူ များရော ကျောင်းသား မိဘများ ဘက်ကပါ စိုးရိမ်ကြမည်မှာ သေချာသည်။ယင်းသို့ပင် အစိုးရသစ်တက်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စတင်အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သည့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအရ ပေါ်ပေါက် လာသည့် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများတွင်လည်း အားနည်းချက်များ စွာရှိပြီး ဝေဖန်မှုများစွာ ရှိနေသည်။အထူးသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့် ကျောင်း တည်ထောင်သူများတွင် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေကြောင်း အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ပုဂ္ဂလိကကျောင်း တည်ထောင်လိုသူများက ဆိုသည်။နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ ကို ဥပဒေမရှိ၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိ ခွင့်ပြုထား သော်လည်း အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများမှာမူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ခက်ခဲသည့် အနေအထားအထိပင် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ တင်းကျပ်ထားခြင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့က ဆိုသည်။ယင်းကြောင့် ကျောင်းလခတိုးမြှင့်မှု မှ စတင်သည့် ပုဂ္ဂလိကပညာရေး ဂယက်မှာ အနားသတ်မဲ့ဖြစ်နေပြီး အဆင်ပြေသလို လုပ်ကိုင်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး စနစ်အတွက် အနားသတ်တစ်ခု တောင်းဆိုလာခြင်းဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။အဆိုပါ အနားသတ်တစ်ခုမှာ မြန်မာပညာရေး နယ်ပယ် တစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်သည့် ပညာရေးဥပဒေ တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေးဟု ဆိုသည်။"ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောရရင် နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု စနစ်ကို အမြဲတမ်း အထောက် အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ လို့ခေါ်တဲ့ ပေတံတစ်ချောင်း လိုတယ်၊ အဲဒီ ပညာရေးဥပဒေ မရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး က နှောင့်နှေးနေမှာပဲ၊ ဒီဟာက ဘယ်တုန်း ကမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိခဲ့ဘူး၊ တခြားနိုင်ငံ တွေမှာတော့ ဒီလိုဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဆောင်ရွက်ကြတယ်" ဟု နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကွန်ရက် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဒေါက်တာဘိုင်အိုက ထောက်ပြသည်။သို့သော် ပညာရေးဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေး ချက်ချင်းလုပ်ဆောင် နိုင်သည့် ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ အချိန်ယူစနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ရာ ပထမဆုံးသက်တမ်း အလိုက် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးသော၊ ထိန်းကွပ်စောင့်ကြည့်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များက သုံးသပ်ကြသည်။နိုင်ငံတကာအဆင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း များအတွက် ကျောင်းများကိုစောင့်ကြည့် သုံးသပ်သည့် ကော်မတီ ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကော်မတီက ကျောင်းများ၏ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း မာတိကာနှင့် ကျောင်းများ၏ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ၊ အစိုးရပညာသင် ကျောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတို့ကို ဆောင် ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ကြကြောင်း ဆရာ ဦးအောင်ဆန်းမြင့်က ရှင်းပြသည်။"နောက်ပြီး အဲဒီကော်မတီက သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာနိုင်တဲ့ မည်သည့်ကျောင်းမဆို ဒီမှာဖွင့်လှစ်ခွင့် ရတဲ့အတွက် အပြိုင်အဆိုင်တွေ များရင် ကျောင်းသားတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာ တွေ များလာနိုင်တယ်" ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ပြည်ပနိုင်ငံများ တွင်မူ နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မရှင်က အဆိုပါကျောင်းများ အတွက် လိုင်စင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လိုအပ်မည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ပေးခြင်း၊ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ပေးခြင်းနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် နိုင်ငံ၏ စာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းနောက်ခံများ ကို မသင်မနေရ သင်ကြားပေးစေခြင်း တို့ သတ်မှတ်ကြကြောင်း Tip Top ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားသည်။ယင်းသို့ပင် ပုဂ္ဂလိကဆရာများ အသင်းချုပ် ပြန်ကြားရေးမှူးလည်း ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦး (ဒေါက်တာဘိုင်အို) ကလည်း "စင်ကာပူနိုင်ငံ မှာလည်း ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းကောင်စီဆိုတာ ရှိတယ်၊ အဲဒီ ကောင်စီက လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးနဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ပညာရေးစီမံကိန်းကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံတကာ အကြံပေးတွေ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိတွေ ပူးပေါင်းပြီး ဖွဲ့ထားတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း အဲလိုကောင်စီတစ်ရပ် ပေါ်ဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ဥပဒေ မပေါ်လာမီမှာ ဒီကောင်စီကို အရင် ဖွဲ့စည်းထားသင့်တယ်၊ သူက တစ်ဆင့် ပုဂ္ဂလိက ပညာရေးဥပဒေ ပေါ်လာဖို့ ညှိနှိုင်းရမယ်" ဟုထောက်ပြသည်။ပုဂ္ဂလိက ပညာရေးစနစ် ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ပေါက်လာရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အရေးကြီးကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရက ပညာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို မနိုင်ဝန် ထမ်းနေရကြောင်း၊ ငွေကြေးတတ်နိုင် သူများက ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့ ရောက်ရှိ သွားပါက အစိုးရ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့ သွားသည့် အတွက် ငွေကြေးမတတ်နိုင် သူများအတွက် ကောင်းမွန်သည့် ပညာရေး ကို အစိုးရက ကောင်းစွာ၊ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ဖော်ဆောင် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက သုံးသပ်ပြသည်။ယင်းကြောင့် မြန်မာပညာရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် အတွက် ပညာရေးနယ်ပယ် အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသော ပညာရေး ဥပဒေတစ်ရပ် ရေးဆွဲရန် လိုအပ်နေပြီး ယင်းဥပဒေ စနစ်တကျ ရေးဆွဲနိုင်စေရန် အတွက် ပညာရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော ကော်မရှင် တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။ယင်းမှာ ကျောင်းလခ တိုးမြှင့်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပညာရေး ဂယက်က ပေးသည့် အထိန်းအကွပ်မဲ့ မြန်မာ့ပညာရေး စနစ်အတွက် အနားသတ်ဖြစ်လာ မည်လား ဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်ပေသည်။(ကျော်ဆန်းမင်း၊ လဲ့ရည်မြင့်) The Voice Weekly
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News မြန်မာစံတော်ချိန် ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ - မေ 18, 2013
Categories: VOA Radio စစ်တပ်သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေတွေပေါ် ဝင်ရောက်ထွန်ယက်လို့ လယ်တဲတွေကို စစ်သားတွေ ဖျက်စီး (ရုပ်/သံ)
Sat, 05/18/2013 - 08:26
သန်လျင်မြို့နယ် အလွမ်းဆွတ် ကျေးရွာက တပ်မတော်က သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ဧက ၃ဝဝကျော်ပေါ် ဒေသခံ လယ်သမားတွေက ဝင်ရောက်ထွန်ယက်ခဲ့ တာကြောင့် မေလ ၁၇ရက်နေ့ညမှာ စစ်သား ၁၁ယောက်က လယ်စောင့် တဲတွေကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီး ခဲ့ပါတယ်။သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေ တောင်ကိုရီးယားရောက်
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံဟာ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ရုန်းထွက်လာရတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်ပေမဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကတော့ မြန်မာထက် အချိန်စောပြီး နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ အခုအချိန်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးဖြစ်နေပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေဆဲပဲလို့ ဒီကနေ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုကိုကြီးက ခရီးရောက်မဆိုက်မှာပဲ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ... Categories: VOA Radio ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေ တောင်ကိုရီးယားရောက်
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံဟာ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ရုန်းထွက်လာရတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်ပေမဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကတော့ မြန်မာထက် အချိန်စောပြီး နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ အခုအချိန်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးဖြစ်နေပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေဆဲပဲလို့ ဒီကနေ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုကိုကြီးက ခရီးရောက်မဆိုက်မှာပဲ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ... Categories: VOA Radio အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခွင့်ပြုပေးသူများ သမိုင်းတွင် တရားခံဖြစ်မည်
Sat, 05/18/2013 - 08:04
အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် ပထမဆုံး အစည်းအဝေးထိုင်သည့် နေ့တွင်ပင် ပြည်ပမှ ဘီယာချက် စက်ရုံ တစ်ရုံကို ပြည်တွင်း၌ တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြု လိုက်ပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုသိရရာ အဆိုပါ ခွင့်ပြုချက်သည် ယခင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ့၏ လုပ်လက်စအလုပ်ကိုအသစ်တက်လာ သည့်အဖွဲ့က အတည်ပြုပေး လိုက်ရသည့် အဆင့်သာ ရှိပေလိမ့်မည်။မီဒီယာအသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘီယာချက်စက်ရုံများ လိုသည်ထက် ပိုမိုခွင့်ပြုနေသည့်အပေါ် ဝေဖန်ထောက်ပြရေးသားနေကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့သည့် လပိုင်းအတွင်း အများဆုံးခွင့်ပြုခဲ့သည်မှာ ဘီယာချက် စက်ရုံများဖြစ်နေသည်က မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသနည်း ဆိုသည့်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာများစွာရှိနေသည်။၁၈၈၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူပြီးချိန်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း ၁၂၆ နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘီယာချက်စက်ရုံ သုံးရုံသာ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ လတာကာလအတွင်း အောက်ပါကုမ္ပဏီ ငါးခုကို နောက်ထပ် အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခုနစ်ရုံ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် စောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူတို့က ရိုးသားစွာ ခွင့်ပြုခဲ့ ခြင်းဟုတ်မဟုတ်၊ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဆိုသည်ကို မေးခွန်းများစွာမေးရန် ရှိလာသည်။(၁) ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်) သံလွင်ဧရာကုမ္ပဏီ(မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု)(၂) ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ အဖျော် ယမကာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး)၊Beer Chang Intl Co;ltd နှင့် Myanmar Distillery Co;ltd (နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရခွင့်ပြု)(၃)၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (မင်္ဂလာဒုံ)၊ Diamond Mayson Co;ltd(မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရခွင့်ပြု) (ရန်ကုန်တွင် ခွင့်မပြုတော့ဘဲ မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုခုတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု သိရ)(၄) ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် (ပဲခူး)၊ မြန်မာကားလ်စ်ဘတ်ကုမ္ပဏီ(နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု)(၅) ၂၀၁၃ မေ ၁၀၊ Heinekin ဘီယာ ချက်စက်ရုံ(မှော်ဘီ)၊ APB Alliance Brewery Co;ltd နှင့်Alliance Brewery co;ltd-Myanmar၊ (နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြု) (ယခင်နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ လျှောက်ထားခြင်းမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖြစ် ပြောင်းလဲလျှောက်ထား)ယမကာ သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အသည်းရောဂါဖြင့် သေဆုံးနေသည့် ဆယ်ကျော်သက်များတစ်နေ့တခြားများပြားလာနေကြောင်း လေ့လာချက်များအရ တွေ့ရှိထားချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဘီယာချက်စက်ရုံများကို လွယ်လွယ်ကူကူ လိုသည်ထက်ပိုပြီး ခွင့်ပြုပေးနေသည်မှာ မစဉ်းစားတတ်အောင်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောကြားလာသည်။ယမကာသောက်သုံးမှုသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံအရရော၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် ဘာသာရေးအရပါ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ယခုအခါ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းမငယ်လေးများပါ ဘီယာ ယဉ်ကျေးမှုအတွင်း စီးမျောနေကြသည်မှာ လက်မခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ယမကာဈေးနှုန်းကို မြင့်မားစွာ ရောင်းချခြင်း၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်၊အသက်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘီယာနှင့်အရက်ကို အသက်အရွယ်မရွေး၊ အချိန်နှင့် နေရာမရွေး ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနေသည်မှာလူငယ်များ၏ အကျင့်စာရိတ္တကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးစေကြောင်းဝေဖန်စောင့်ကြည့်သူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် အခွန်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံတွက်ချက်ထားသည့် စာရင်းဇယားများအရ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်တွင်း အရက်မျိုးစုံ ပုလင်းပေါင်း (၁၇၂ ဒသမ ၂)သန်း၊ ဘီယာပုလင်းမျိုးစုံ (၆၇ဒသမ ၉၇)သန်း ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါစာရင်းတွင် စည်ဘီယာများ၊ ဘီယာသံဘူးများ၊ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် တရားမ၀င် အရက်ဘီယာများ မပါရှိပေ။ဘီယာ သံဘူးမျိုးစုံ နှင့် စည်ဘီယာကိုပါ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘီယာပုလင်းနှင့် သံဘူးမျိုးစုံ အရောင်းမှာ သန်း ၁၆၀ အထက် ရှိမည်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးကတွက်ချက်ပြသည်။အရက်ဘီယာ ယမကာထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် ခွင့်ပြုခြင်းသည် အစိုးရကို အခွန်အကောက်တိုးမြှင့်ရရှိစေသည်မှလွဲပြီး တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်အကျိုးမှမရှိဘဲ ရေရှည်တွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများဖြင့်သာ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအတွက်မူ အမြတ်အစွန်း ကြီးမားသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ဘီယာအရက်သောက်သုံးသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများအပေါ် အရက်နှင့်ဘီယာကုမ္ပဏီများက မည်သို့တာဝန်ယူမည်နည်းဆိုသည်ကို မည်သည့် အရက်နှင့်ဘီယာကုမ္ပဏီကမှထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါ။သို့သော်လည်း ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် အရက်နှင့် ဘီယာချက် စက်ရုံများကို သမိုင်းတစ်လျှောက် မကြုံဖူးအောင် ခွင့်ပြုပေးနေခြင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်ကောင်းကျိုးရှိသဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနေသနည်းဆိုသည်ကို ဖြေကြားစေလိုပါသည်။အရက်နှင့် ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ဆိုးကျိုးများအပေါ် မည်သူက တာဝန်ယူမည်နည်းဆိုသည်ကို သိလိုပါသည်။ယခုဆောင်းပါးသည် တစ်ချိန်တွင် အရက်နှင့် ဘီယာများကြောင့် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများရှိပါက အထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရေးသားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။မီဒီယာမျိုးစုံတွင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူများက ကန့်ကွက်နေပါလျက် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့် အရက်နှင့် ဘီယာချက် စက်ရုံများ ဆက်လက်ခွင့်ပြုနေမည်ဆိုလျှင် ထိုခွင့်ပြုသူများသည်တစ်ချိန်တွင် သမိုင်းတရားခံများအဖြစ် မှတ်တမ်းအတင်ခံရမည်မှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ပေတော့သည်။မာဂျေ | မြန်မာတိုင်း(မ်)
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News နယ်စပ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်ခြင်း တိုးလာ
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတို့၌ တာရှည် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် တင်ပို့မှုတို့မှာ သိသိသာသာ တိုးလာကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တောပြုန်းခြင်းနှင့် မြေအခွင့်အရေးများကို လေ့လာနေသူ သုတေသန တစ်ဦးက ဧပြီလဆန်း လောက်က တရုတ်နယ်စပ်မြို့ ရူလီအနီး၌တွေ့ရှိခဲ့သည့် အဖြစ်ကြောင့် တုန်လှုပ်သွား ခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။လမ်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက် ငါးမိုင်လောက်ရှည်လျားသည့်နေရာများ၌ သစ်ဆိုင်များကိုသာ တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ နယ်စပ်အနီးသို့ ရောက်လာသည့်အခါတွင်လည်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှနေပြီး တန်ချိန် ၁၅-၂၀ တင်ဆောင်နိုင်သည့် ထရပ်ကား အစီးငါးဆယ်ခန့်ကို တွေ့ခဲ့ ရကြောင်း၊ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ ပို၍လှုပ်ရှားသွားလာမှု ပို၍များကြောင်း၊ တစ်နေ့လျှင် ထရပ်ကား အစီး ၂၀၀ ခန့် မြန်မာနိုင်ငံဘက် (နမ့်ခမ်း) မှ တရုတ် နိုင်ငံ (နန်ဒေါင်) ထဲသို့ ၀င်ရောက်ကြောင်း ထိုသုတေသနပညာရှင်ကပြောသည်။အမည်မဖော်လိုသည့် ထိုသုတေသနပညာရှင်က သူသိရှိရသည့် သတင်းများမှာ ခိုင်လုံသည့်လေ့လာမှုများထက် ပုံပြင်ဆန်ပြီး မျက်မြင်သက်သေများ၏အပေါ်၌ အခြေခံကြောင်း ပြောသည်။ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ရက်အဖွဲ့မှ အရာရှိ ဆိုင်းခါဆန်သည် ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခရီးသွားလာသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်က ဤသတင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။လွန်ခဲ့သည့် ၁၈ လ အတွင်း၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှု သိသာများပြားခဲ့သည်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။သံလွင်မြစ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းသူကပြောသည်။ဤတရားမ၀င်သစ်ကုန်သွယ်မှုမှာ နှစ်အတော်ကြာကတည်းက တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ်တွင်ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။၂၀၀၅ ခုနှစ်အကုန်နှင့် စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ "Global Witness က China's Choice Ending theDestruction of Burma's Frontier Forests" အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်နှင့်မြန်မာအစိုးရ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ဤကုန်သွယ်မှုကို နှိမ်နင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။မြန်မာသစ်တင်ပို့ခြင်းကို တရုတ်အစိုးရက ပိတ်ပင်လျက်၊ မြန်မာအစိုးရကလည်း အလားတူသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်လျက်၊ ကချင်ပြည်နယ်၌ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကိုလည်း ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်က Global Witness ၏ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု၌ နှစ်နိုင်ငံပိတ်ပင်မှုများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်၌ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သိသိသာသာလျော့ကျသွားပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဆက်စပ်ကုန်သွယ်မှုလည်း အလားတူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။သို့သော်လည်း မကြာမီနှစ်များအတွင်း၌ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အစိုးရနှင့်ကေအိုင်အေ တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးနောက် တရားမ၀င်သစ်ဈေးကွက်မှာ ပြန်လည်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး လုံးဝဒဏ်ခတ်ခြင်း မခံရဘဲ ပြန်လည် လှုပ်ရှားအသက်ဝင်လာခဲ့သည်။သုတေသနပညာရှင်ယုံကြည်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်ခုမှာ ကေအိုင်အေ တပ်သည်တရားမ၀င်သစ်များ ရောင်းခြင်းမှရသည့် အမြတ်အစွန်းများဖြင့် ၎င်း၏ စစ်တပ်ကို အင်အားဖြည့်ပြီးအစိုးရတပ်များနှင့် စစ်ဆင်နွှဲလျက်ရှိကာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများသည်လည်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် ဒေသများသို့ မသွားဝံ့ကြသည့်အတွက် အစိုးရထိန်းချုပ်သည့် ဒေသများအတွင်းရှိ ကျွန်းသစ်များမှာ အစောင့်အရှောက်မရှိ ဖြစ်နေကြ၏။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြတ်စံက ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် ရှိကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာသည့် သတင်းများ ၎င်းတို့ရုံး၌ မရရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။နယ်စပ်ဒေသ၌ ပဋိပက္ခများရှိခြင်း နှင့် ဝေးလံခြင်းတို့ကြောင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် တစ်လျှောက်ရှိအချို့ ဒေသများသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများသွားရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ဦးအောင်မြတ်စံက ၀န်ခံ ပြောဆိုခဲ့သည်။အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်၌ သစ်များတင်ဆောင်ထားသည့် ထရပ်ကားများ နယ်စပ်မှ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်နေသည့် သတင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာ၌ သူ့ရုံးအနေဖြင့် မည်သည့်သတင်းမှမရရှိကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အလွန်သတိထားကြောင်း ဦးအောင်မြတ်စံ က ပြောသည်။တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာရှုန်ကိုဖုန်းက ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကာ နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုကို အားဖြည့်ပြီး နယ်စပ်ကူးသည့် ရာဇ၀တ်မှု အလုံးစုံတို့ကို နှိမ်နင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ ရှုန်ကိုဖုန်းက ပြောကြားသည်။ဘီလ်အိုတူးလ်သောင်းညွန့် ဘာသာပြန်သည်။(မြန်မာတိုင်းမ်)
တရုတ် နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်သွား နေသည့် သစ်တင်ကားများကို နယ်စပ်၌ တွေ့ရစဉ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်သွားနေသည့် သစ်တင်ကားများကို နယ်စပ်၌ တွေ့ရစဉ်။
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News တာလောကြီး ဌာနေပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ် အခမ်းအနား
Sat, 05/18/2013 - 07:47
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ တာလောကြီးဒေသမှာ၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ မေလ (၁၆)ရက်နေ့က (၃၇)တပ်ရင်းနှင့်အတူ ပြည်သူ့စစ်အင်အား (၈၄၀)ကျော်ဖြင့် ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (၁)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ရည်ရွယ်ချက် (၃) ရက်ဖြင့် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ်ခြင်း၊ စစ်ရေးပြခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ရိုးရာအကများဖြင့် ပျော်ရွင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ရိုးရာ လှေလှော်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တာလောကြီးဒေသ၊ ဌာနေပြည်သူ့စစ် တစ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပရသော ရည်ရွယ်ချက် (၁) လက်နက်အားကိုး၍ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှုမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး (၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အတူနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားရေး (၃)KIO,KIA အဖွဲ့များလည်း ပြည်သူလူထု၏ ခံစားနေရသော ဒုက္ခများကို မျှဝေခံစားအလေးထား၍ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆွေးနွေးရေး၊ စသည်တို့ကို ဦးတည်ရည်ရွယ်၍ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်း ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြည်သူ့စစ် (၁)နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားသို့ (၁) ဒေါ်ခင်ပြုံးရည်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး (၂) ဦးဖေသောင်း ကချင်ပြည်နယ် အမှတ်(၆) မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးစံပြည့် ကချင်ပြည်နယ် အမှတ်(၇) မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဟောပြောမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟောပြောချက်များမှ ကောက်နုတ်ချက် တစ်ချို့မှာ အတ္တကြီးမားသော လက်နက်ကိုင် လူမျိုးစုတွေကြောင့် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) လူမျိုးစုတွေ လူအင်အား ရှိသော်လည်း ဘက်ညီသော အင်အားတွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လက်နက်ကိုင်ဖို့လို။ လက်နက်ကိုင်ခြင်းသည် သူတပါးကို အနိုင်ကျင့်ဖို့၊ နှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နဲ့၊ သူတပါး လေးစားမှု ရနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်မှတ်ယူ ထားကြရန်ဖြစ်- စသည်တို့ဖြင့် တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)လူမျိုးစုများ၏ သမိုင်း၊ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဟောပြောခဲ့ပြီး တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) ရှမ်းလူမျိုးများ၏ အမျိုးဘာသာ သာသသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြစ်ကြီးနားနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတလျှောက် မိမိတို့ပျောက်ဆုံးခဲ့သော နယ်မြေ ပြန်လည်သတ်မှတ် ပေးနိုင်ရေးတို့အပြင် လက်တလောမှာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်နယ်စပ်များတဆင့် စိမ့်ဝင် ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ်တို့ အကြောင်းကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွ ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြားပြီး (၂)နှစ်ကာလ ကြာမြင့်လာသည့်တိုင်အောင် ပီပြင်သော ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး မဖေါ်ဆောင်နိုင်သေးသည့်အတွက် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ မပြန်နိုင်ကြသေးသည့်အပြင် မိမိတို့၏ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း KIA စစ်သား စုဆောင်းရေး အန္တရယ်နှင့် ထောင်ထားသော မိုင်းအန္တရယ်များကြောင့် ရွာနှင့် ဝေးလံသော နေရာများသို့ သွား၍ မလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည့်မှာ (၂)နှစ် ရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုလို စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကြားမှ မိမိတို့၏ အသက်၊ အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ပြည်သူ့စစ်တွေ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့စစ်နာယက ဦးစန်းဝေမှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဦးကော လေးby Myanmar News Now
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးမှ ဟောပြောနေစဉ်
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News မြောက်ကိုရီးယား တာတိုဒုံးကျည် ၃ စင်းပစ်လွှတ်
Sat, 05/18/2013 - 07:36
မြောက်ကိုးရီးယားဘက်က နည်းပညာစမ်းသတ်မှု အနေနဲ့ အခုလို တာတိုပစ် ... Categories: VOA Radio မြောက်ကိုရီးယား တာတိုဒုံးကျည် ၃ စင်းပစ်လွှတ်
မြောက်ကိုးရီးယားဘက်က နည်းပညာစမ်းသတ်မှု အနေနဲ့ အခုလို တာတိုပစ် ... Categories: VOA Radio မြန်မာ အနီး ဘင်္ဂလာရေပြင်တွင် လူသေအလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိ
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေပြင်တွင် နောက်ထပ် လူသေ အလောင်း ၇ လောင်းကို ယမန်နေ့ နံနက်က ထပ်မံ ဆယ်ယူရရှိခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလာရဲက ပြောသည်။ ယခု ဆယ်ယူရရှိသည့် အလောင်းများမှာ ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြပြီး တက်ကနက် မြို့နယ် အတွင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် မျောပါနေ သည်ကို ဒေသခံများ၏ အကူအညီဖြင့် ဆယ်ယူခဲ့သည်ဟု ရဲတာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News နယူးယောက်-ဘော်စတွန် ရထားတိုက်မှု ၆၀ ကျော်ဒဏ်ရာရ
Sat, 05/18/2013 - 07:24
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း နယူးယောက် နဲ့ ဘော်စတွန် မြို့ကြား ရထား ၂ စင်း တိုက်ခိုက်မိတဲ့အတွက် လူ ပေါင်း ၆၀ ထက်မနည်း ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။
သောကြာနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ နယူးယောက်မြို့ အရှေ့ မြောက်ဘက် ၆၂ မိုင်လောက်အကွာ Connecticut ၊ Bridgeport နားမှာ ခုလို ရထားတိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၅ ဦးဒဏ်ရာ ပြင်းတန်တဲ့အထဲ၊ ၁ ဦးက အလွန်စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ Connecticut ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Dannel Malloy ကသတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုပါတယ်။
... Categories: VOA Radio နယူးယောက်-ဘော်စတွန် ရထားတိုက်မှု ၆၀ ကျော်ဒဏ်ရာရ
... Categories: VOA Radio မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19
မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.19ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါPdf ကို ဖတ်ရှုရန်အတွက် အောက်ပါလင့်မှ font ကို download ရယူပြီး မိမိ သုံးနေသော ကွန်ပျူတာတွင် Install လုပ်ပေးရပါမည်။http://www.mediafire.com/?ojojmbuhp3sq1jm
http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV Categories: Myanmar News မေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)
Sat, 05/18/2013 - 06:53
မေလ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် ၇ ရက် ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ် (၃၉)ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ